Sharma yakagadzira masango makumi matatu nematatu nehunyanzvi hwayo | Green Renewables
Iye murume anogadzira masango muIndia anogonawo kuzviita mumunda wako wega
Zvirokwazvo vamwe venyu vanotiverenga muchaziva nyaya yakanyorwa naJean Giono inonzi "Murume akasima miti" iyo inotaura nyaya yaElzéar Bouffier, anofungidzira mufudzi, kunyange achitendeka chose, uyo kwemakore mazhinji akazvipira kuzvidyara miti munzvimbo yakakura yeProvence uye yakashandurwa ikave nzvimbo izere nehupenyu uye greenery iyo yaimbove dongo renzvimbo. Nhau isinganzwisisike inoratidza kuti tine sei simba rekushandura nharaunda yakatitenderedza nekutsungirira kushoma uye nebasa rakanaka, iro anaShubhendu Sharma.
Sharma Akasiya basa rake sainjiniya kudyara miti kweupenyu hwake hwese. Uchishandisa iyo Miyawaki nzira yekukura matanda uye kushandura chero nzvimbo kuita sango rekuzvichengetedza mumakore mashoma. Yakakwanisa kugadzira masango makumi matatu nematatu muIndia mumakore maviri. Pano tinokuratidza maitiro aakazviita.
Shubhendu Sharma, injinjiniya wemaindasitiri, anounza mukana wekuunza iyo chaiyo sango kubindu rako wega. Izvo zvese zvakatanga apo Sharma vakazvipira kubatsira naturist Akira Miyawaki kurima sango panzvimbo yeToyota yaaishanda. Maitiro aMiyawaki ave achishandiswa kumutsiridza masango kubva kuThailand kuenda kuAmazon, zvichitungamira Sharma kufunga kuti inogona kuita zvakafanana muIndia.
Sharma akatanga kuyedza iyo modhi uye akagadzira yakasarudzika vhezheni yenyika yake mushure mekushandurwa kwakasiyana siyana vachishandisa zvimwe zvakasarudzika ivhu zvivakwa. Kuedza kwake kwekutanga kugadzira dondo kwaive mubindu rake muUttarakhand, kwaakakwanisa kugadzira rimwe munguva yegore. Izvo zvakamupa kuvimba kwakakwana kuti asvetuke munguva yakazara, asiya basa rake, uye apedze yakawanda yegore achitsvaga maitiro ake ega.
Sharma yakagadzira Afforestt, sevhisi yekupa masango echisikigo, emusango uye anozvitsigira muna 2011. Mumashoko aSharma pachake: «Pfungwa iyi yaive yekudzosa masango chaiwo. Ivo havasi chete vanochengetedza vega asi vane zero kuchengetedza«. Imwe yesarudzo dzake hombe yaive yekusiya basa rake sainjiniya ane mari yepamusoro kuToyota kudyara miti kwehupenyu hwake hwese.
Mavambo acho aive akaomarara, asi ikozvino Sharma ine timu yevanhu 6. Oda yavo yekutanga yaive kubva kuGerman fenicha inogadzira iyo yaida zviuru gumi zvemiti kuti idyarwa. Kubva ipapo, Afforestt yakashandira vatengi makumi mana nevatatu uye vakadyara inoda kusvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu emiti.
1 Mashandiro anoita Masango
Mashandiro anoita Masango
Afforest inopa yakakwana kutonga uye kuita basa inosanganisira zvinhu, zvishandiso, maturusi uye zvese zvinodiwa muchirongwa uchishandisa nzira yeMiyawaki. Maitiro acho anotanga nekuyedza ivhu uye kutsvaga izvo zvinodiwa kuti ive iyo chaiyo yekutanga kudyara marudzi ese emiti mariri.
Nyika Iwe unofanirwa kuve unokwana 93 mativi metres kuti utange kudzidza ndeapi marudzi ezvirimwa uye biome anodikanwa. Mushure meyedzo, mbesa diki dzekutanga dzinogadzirirwa muvhu rine biomass kuti iwedzere kutakura.
Finalmente inotanga nzira yekudyara pakati pemakumi mashanu kusvika zana emarudzi ezvisikwa. Chikamu chekupedzisira chakanangana nekuisa fetereza nekudiridzira nzvimbo iyi kwemakore maviri anotevera, mushure menguva ino, sango harichazoda chero kuchengetedzwa uye rinogadzikana roga. Iko mukana wakakura weAfforestt ndeyayo yakaderera mutengo modhi nemabhushi madiki ari kukura anenge mita imwe pagore.
Afforest yakagadzira masango makumi matatu nematatu mumaguta gumi nerimwe muIndia uye inoda kuwedzera iyi nhamba. Sharma ine zvirongwa zvakawanda zvekukura uye kuisa iyi tekinoroji kuitira kuti vanhu vazhinji vakwanise kuishandisa.
Iri kuronga pamusoro tangisa software yakatarwa nechaunga mari kuitira kuti chero munhu kukwanisa kuwedzera yako yemuno miti yemusango munzvimbo yako kuchombo. Saka kana mumwe munhu akada kudyara yavo sango, ivo vaizoziva kuti ndezvipi mhando zvaizotora kuti ive inosimudzira pachezvayo.
Imwe yemafungiro ake kugadzira nzvimbo yaunogona kutora michero kubva mubindu rako wega kana zano zvirinyore pane kuzvitenga pamusika. Chinonakidza chirongwa chekugadzira masango asingade chero kugadziriswa uye kuti kana iwe uchida kugadzira yako iwe unogona kushanyira ayo dandemutande kana kubata Sharma iye pachake pa info@afforestt.com.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Iye murume anogadzira masango muIndia anogonawo kuzviita mumunda wako wega
Ndakafarira tsamba yako, inonakidza kwazvo. Nepo vamwe vakazvipira kutema masango ese, vamwe vanozvigadzira. Ini ndinoda zano.
Thanks Beatriz! Kana pachinzvimbo chekuparadza isu takagadzira, isu tese taizove zvirinani
Ndatenda Manuel. Iyi posvo yakandiita kunyemwerera. Ndakaisa nyeredzi pandaida kuisa 5 asi hazvichabvumiri ini kugadzirisa. Ndatenda
Hapana chinoitika! Chinhu chakakosha ndechekuti iwe waifarira iyo posvo: =)
Carlos Toledo akadaro
zano rakanaka kwazvo
Ini ndinoshanda mune basa uko isu tinogona kuita izvi
Pindura Carlos Toledo
Wenyika Yekutanga Thorium Reactor ya2016 Kupa Yakachengeteka uye Yakachipa Nyukireya Simba
Simba rezuva rakawedzera simba muAustralia